Omnichannel Kushambadzira Kunopa Kuwedzera Kuvimbika uye Vanokosha Vatengi | Martech Zone
Omnichannel Kushambadzira Kunopa Kuwedzera Kuvimbika uye Vanokosha Vatengi
Muvhuro, Zvita 31, 2018 Muvhuro, Zvita 31, 2018 Chuck Hengel
Mhando dzinofanirwa kuputsa online uye pasiroseti sosi kusangana nezvinotarisirwa nevatengi.
Sezvo tsumo yekare ichienda, Mhepo inosimuka inosimudza zvikepe zvese. Iwo iwo musimboti unoshanda kune inoshanda mutengesi kushambadzira. Mushandirapamwe une simba wekutepfenyura unogona kuwedzera kukonzeresa kwemamwe mabasa ekushambadzira, kubva mukuwedzera webhusaiti yako uye kutsvaga traffic kusvika mukusimudzira yako yemagariro midhiya kubatanidzwa uye neruzhinji hukama buzz.
Vanoshambadzira veSavvy vakazviona izvi kwemakore uye vakashandisa nzira dze multimedia kuti vatore mukana webhenefiti. Nekudaro, kungoenderana nekugadzira kwako munzira dzakasiyana siyana hakuchakwanise. Mune yanhasi hyper-inokurumidza, uber-yemunhu, chero musika wechigadzirwa, vatengi vari kutyaira shanduko nyowani: omnichannel.
Chero nguva, chero kupi, chero chinhu chinobatanidzwa
Funga mashandisiro anoita vatengi nemaki nhasi. Vazhinji vekuAmerican vachiri kufashukira kuterevhizheni, chete ikozvino zvava ne kure kudzora mune rumwe ruoko uye smartphone kana laptop mune imwe. Isu tinotumira, kutumira mameseji, kutumira, kutsvaga, kutevedzera, kutaura uye kutenga panguva imwe chete neyedu yatinofarira. Zviitiko zvimwechetezvo zviripo mune chaiwo-epasi zviitiko kana vatengi vachishanyira mutengesi, resitorendi kana mupi webasa
Maitiro evatengi akachinja zvakanyanya pamakore gumi apfuura; mhando dzinofanira kushandukawo. Zviitiko izvozvi zvinoyerera nepakati pezviteshi, nzvimbo nemidziyo, nekariro yekuti mabrands haangotizive chete, asi anotibvumidza kuti tifambe mushe mushure nekudzoka, kubva kushambadziro yeTV kuenda kuwebsite, kubva online chat kuenda kuchitoro, kubva kuApp kuenda kufona nzvimbo, zvese neiyo yakafanana caliber yemunhu uye sevhisi.
Omnichannel vatengi vanounza yakawanda kukosha
Icho chirevo chakareba, kuve nechokwadi, kunyanya kana vanovhiringidza maindasitiri vakagadza bhawa repamusoro rekuvandudza uye kuita kusagadzikana. Zvisinei, mibayiro yacho inogona kuva mikuru. A ichangopfuura Harvard Bhizinesi Ongororo kudzidza yevanoda kusvika zviuru makumi mashanu vatengi vevatengesi vakawana omnichannel vatengi - avo vaiita kuburikidza neese ari maviri online uye kunze kwiteshi - vaive vakanyanya kukosha kuchiratidzo. Ivo vakapedza yakawanda, zvese zviri online uye mu-chitoro, vakashanyira nzvimbo yemutengesi yezvidhinha-uye-dhaka kazhinji, vaive vakavimbika uye vangangodaro vachikurudzira mucherechedzo.
Kuti uvandudze yako omnichannel kubatanidzwa, tevera aya akanakisa maitiro:
Dhizaina a chiteshi-agnostic chiitiko. Panzvimbo pekufunga nezve yako mbozha ruzivo, yako yemuchitoro ruzivo uye yako desktop desktop zvakasiyana, gadzirisazve maonero ako. Ziva izvo zvinokodzera zvekubata uye meseji zvinofanirwa kunge zviri, zvisinei nekwekuti mutengi anosvika kwauri. Zvese zvaunogadzira zvinofanirwa kugadzirisa uyu mubvunzo uri nyore: Ungaita sei kuti hupenyu hwemutengi hwako huve nyore sezvinobvira?
Putsa masangano silos. Iwo akanakisa omnichannel zviitiko ane nyore pane kwavo musimboti. Vatengi vanoona nzvimbo yeTV, mameseji kodhi yeSMS yekuitisa nhaurirano yepamhepo wozofamba zvisina mutsindo kune yeku-chitoro odha, netatu nzira nhatu dzinoshanda mukuwirirana.
Muchokwadi, kuzadzisa iro danho rekubatana kunogona kuda kufamba makomo, kunyanya kana madhipatimendi akasiyana achikwikwidza kutonga. Ichokwadi omnichannel zviitiko zvinobva mukushandira pamwe nekubatana, ine data, masisitimu, ekugadzira, vashandi uye hutungamiriri mukuenderana. Dhijitari, mucherechedzo, sevhisi uye ezvitoro zvikwata zvinofanirwa kufamba zvinopfuura zvekupokana, zviri-mumba miganho yekuisa ruzivo rwevatengi kutanga.
Tora zvakakomba nezve yako dhata. Iko hakuna nzira yekutenderedza. Zvinotora zvakapfuma dhata kumasimba omnichannel kubatanidzwa. Uye sekungofanana nehurongwa hwako hwehutungamiriri, data rako rinofanira kusangana kupfuura miganho yesangano. Izvi zvinoreva dhatabhesi uye masisitimu anogona kutsigira 360-degree kuona kwevatengi vako uye kugovana kudyidzana kwevatengi, mune iri pedyo nguva chaiyo, zvisinei nedhiyo kana chiteshi.
Isa imwe nzira, mutengi wako anogona kukumbira iyo SMS coupon inoratidzwa pane yako TV kushambadza uye kurodha kumusoro kwekutenga ngoro kubva kune yavo smartphone? Ko timu yedhijitari inozviziva munguva yekuendesa kushambadzira yepamhepo kana email yakanangwa zuva rinotevera? Uye kana mutengi wako achidzokera kungoro yavo kunotenga, panguva ino pafoni, ko ruzivo rwechigadzirwa ruchabatana here?
Kusimudzira tsika yekambani kune iya yechokwadi omnichannel sangano zvinotora nguva, asi nhanho yega yega kumberi inokuisa padyo nekupindura ehe.
Shanda zvine hungwaru, kwete kuoma. Inoshanda omnichannel mushandirapamwe inotora nzira yakazara: imwe panotepfenyurwa, kugadzira nekushandurwa zvinowirirana. Taura nesu kukurukura kuti ingashandure sei nhepfenyuro yako inotevera yekutepfenyura.
Tags: ruzivo rwevatengiomnichannelomnichannel kubatanidzwa.kushambadzira kwepamhepochitoroyechipiri chidzitiro
Performance kushambadzira izere neeclectic vanamuzvinabhizimusi. Saka payakasvika nguva yekusarudza raramo, wechidiki Chuck Hengel akafadzwa neiyi indasitiri indasitiri yevanogadzira uye vanopenga. Aive nehuropi hwenhamba uye mumwe wevashambadzi vakanyanya kuita basa kuseri kwake, saka akacheka mazino ake achipwanya data kuFingerger. Muna 1997, Chuck akatanga Marketing Architects
Ndiani Achavaka Yako Inotevera Webhusaiti?